Let's talk about IT: လာပြန်ပြီ Spam တွေ
လာပြန်ပြီ Spam တွေ
# mailq | grep marketing@blahblah\_.com | cut -d ' ' -f1 | tr -d '*!' | postsuper -d -
မနေ့က ထမင်းစားနေတုန်း ၊ Mail server ကြီးက respond နှေးလို့တဲ့ ။ ဒါကပုံမှန်လိုဖြစ်နေလို့ ကျနော်လည်း သိပ်တောင် ဂရုမစိုက်မိဘူး။ Mail Server က dedicated လည်းမဟုတ် ။ ဒီ Server ပေါ်မှာ Website 200 ကျော် ၊ Database 100 ကျော် ၊ DNS server အပါအဝင် တခြား service တွေကရှိသေးတယ်။ Mail Server က Postfix သုံးပြီး Domain 200 ကျော်အတွက် Mailbox 3000 လောက်ရှိတယ်။ Server က အဟောင်း၊ ရှေ့မှာ IPS လောက်မဟုတ်ရင်တောင် spam filter ကောင်းကောင်းခံဖို့ ပြောတာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ ။ ဒီတိုင်းပဲ ။ Website တွေ ဘာဖြစ်ဖြစ်က ကျနော်တို့ ဂရုမစိုက်လို့ရပေမယ့် spam ဝင်လို့ Server MTA နဲ့ Spamd က လေးလာရင် ၊ mail delivery နှေးလာရင် ကျနော်တို့ ဖုန်းတွေ အဆက်မပြတ်မြည်ပါပြီ ။ Server ကလည်း သိပ်ကောင်းလှတာမဟုတ်တော့ Mail Queue ထဲမှာ သုံးထောင်လောက်ရှိရင် စလေးလာလေ့ရှိပါတယ်။ ငါးထောင်လောက်ဆို ဘေးချင်းကပ်ပို့ရင်တောင် ဆယ်မိနစ်လောက်နေမှရောက်တယ်။ Server ပေါ်မှာက Opensource Spam filter တစ်မျိုးပဲရှိတာမို့ သိပ် handle မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သူကလည်း 60% efficiency လောက်ပဲရှိတယ်ထင်တယ်။ ဘယ်တော့မှ Spam ကိုနိုင်တယ်လို့မရှိဘူး။ ဒါမျိုးက ဖြစ်နေကြမို့လို့ မနေ့က ဖုန်းတွေလာတော့ အေးဆေးပဲ ။ ထမင်းစားနေလို့ ပြီးရင် ကြည့်လိုက်မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ရုံးပြန်ရောက်တော့လည်း ကျနော်က အလုပ်ထွက်တော့မယ့်လူမို့လို့ တော်ရုံ ကျနော် ဝင်မပါပါဘူး။ ကျနော်နေရာရဲ့ replacement အစ်ကိုကြီးကလည်း ဒီနေ့ off ပါတယ်။ အငယ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျနော်စီက ဒီ hosting service တွေကို handover လုပ်ယူထားရတဲ့ သူ ၊ နောက်ပြီး သူက Redhat certified System Administrator ။ အဟဲ ။ သူ မသိရင်တောင် သူကသင်ရင် သိပ်မကြိုက်ဖူး။ သူ့ကိုပဲ Mail Service မှာ spam ဝင်တယ်ထင်တယ် ကြည့်လိုက်အုန်းလို့ပြောလိုက်မိတယ်။ Spam ဝင်ရင် mailq မှာ deferred တွေ ဘယ်လို ဖျက်ဆိုတာလောက်တော့ သူ့ကို ပြထားဖူးတယ်။ သူကလည်း CD drive ထဲသာ DVD ထဲ့ပြီး ဒီ server က boot မတက်ဘူးပြောရင်ပြောတာ၊ ဒါမျိုးခိုင်းရင် သူသိတယ် ဆိုတာကြီးပဲ။ လူရှေ့မှာ သိပ်သင်လို့ မရဘူး။ သူက ကျနော့ထက် အသက်ရော လုပ်သက်ရောကြီးပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်နေခဲ့လည်းတော့ သိပ်မသေချာဘူး။
သုံးနာရီလောက် အထိ mail send / receive နှေးနေသေးတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ရောက်လား မရောက်လားသာ မသိတာ ။ ဒါပေမဲ့ accountability အတွက် production server တွေကို ကျနော် login မဝင်တော့ပါဘူး။ ဒါကျနော့ နောက်ဆုံး အပတ်လေ။ သူလည်း ကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေတော့ အဆင်ပြေလား သွားမေးလိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ GM က ဖုန်းဆက်တယ်။ ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ ၊ ငါ့ဖုန်း ကြာရင် explode ဖြစ်တော့မယ်တဲ့။ Reseller တွေကလည်း တဂွမ်ဂွမ်ဆက်နေပြီ ။ ဖြစ်နေတာ သုံးနာရီလောက် ရှိသွားပြီကိုး။
Login ဝင်ပြီး အရင်ဆုံး Mail Queue ကိုကြည့်မိတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ
လို့ ကြည့်တော့ တော်တော်နဲ့ return မလာဘူး ။ တော်တော်များနေလို့ဖြစ်မယ် လို့စဉ်းစားပြီး mailq ပဲရိုက်ကြည့်လိုက်တယ် ။ အဲမှာ စတွေ့တာပဲ ။ ပုံမှန် လေးငါးထောင်လောက်ဆိုရင် mailq က ဆယ်စက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာတင် ဆုံးပါတယ်။ ပေါ်လာတာကလည်း မြန်လို့ လိုက်ဖတ်ဖို့ မမှီပါဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ တစ်မျက်နှာချင်း ဖြေးဖြေးချင်းပေါ်နေတယ်။ တော်တော်ကြာတဲ့အထိလည်း မပြီးတော့ escape လိုက်တယ် ။ top နဲ့ကြည့်တော့ load က postfix-queue process က အမြဲတန်း CPU usage 40% လောက် တက်နေတယ်။ ဒီလောက်နဲ့တော့ mailq က အဲလောက် နှေးမနေသင့်ဘူးပေါ့။ အခုက mailq ထဲ mail ဘယ်လောက်ရှိနေမှန်းကို မသိရသေးဘူး။
ခုနက mailq ကြည့်တုန်းက marketing@blahblah.com ဆိုတဲ့ mail တွေ အများကြီးတွေ့လိုက်တယ် ။ မြင်လိုက်သမျှအားလုံးနီးပါး သူ့ mail တွေကြီးပဲ။ အဲဒီ client ကိုလည်း ကျနော်သိပါတယ်။ တွေ့ကရာ click ပြီး မကြာမကြာ virus ဝင်လေ့ရှိသလို password ကိုလည်း password တို့ 123456 တို့ သိပ်ပေးလွန်းလို့ မကြာမကြာ ပြသနာ တက်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ mail address တစ်ခု ပြသနာဖြစ်ပြန်တာလား၊ သူတို့ပဲ mail advertisement ကို စွတ်လုပ်နေသလားမသိဘူး။ Maillog မှာ သွားရှာကြည့်တော့ ဒီ mail address marketing@blahblah.com ဆိုပြီး IP အစုံကနေ authenticate လုပ်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်။ သွားပြီဆိုတာ သေချာပါတယ်။ သူတို့ကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးဖို့ တစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်။
ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ ၊ ဖျက်စရာရှိတာ ဖျက် တဲ့နေရာမှာ ကျနော် ထိပ်ဆုံးကပါမယ်ထင်တယ်။ ဘာမှလည်း ကြည့်လို့မရတော့ အရင်ဆုံး postfix service ကို ခဏပိတ်လိုက်တယ်။ Lag နေတာလည်း တော်တော်ကြာပြီမို့ တစ်မိနစ်လောက် downtime က ပြောပလောက်အောင်မရှိဘူးလို့ ယူဆလိုက်တယ်။ Service ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်ဖို့ ခဏတော့ အနစ်နာခံရမှာပဲ။
အဲဒီ mail address ကနေ mail ပို့တာကို temporary barred လိုက်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်လည်းဆိုရင်တော့ Postfix မှာ smtpd_recipient_restrictions နဲ့ smtpd_sender_restrictions ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲမှာ ဘယ် mail address ကနေလာတဲ့ mail ၊ သို့မဟုတ် ဘယ် mail address ကို ပို့မယ့် mail ကို drop ပေးပါလို့ configure လို့ရပါတယ်။ အဲမှာ marketing@blahblah.com ကို smtpd_sender_restrictions မှာ ထဲ့လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ အရင် postfix service ကိုပြန်စလိုက်တယ်။
နောက်ပြီး mailq ထဲမှာ marketing@blahblah.com က mail ဘယ်လောက်ရှိသလည်းလို့ သိချင်လို့ ဒီ command လေး run ကြည့်တယ်။
# mailq | grep marketing@blahblah\_.com | wc -l
ဒါပေမဲ့ ခုနက ဒီအတိုင်း mailq ရိုက်တာတောင် result ကမဆုံးတာ ၊ ဒီလိုလည်း တော်တော်နဲ့ result မရပါဘူး။ အဲဒီမှာပဲ client ကအကြောင်းပြန်တယ်။ သူတို့ ဒီနေ့ အဲ marketing email ကနေ ဘာမှမပို့ပါဘူးတဲ့။ Password က password လို့ပေးထားကြောင်း အကြောင်းပြန်တယ်။ ဒါဆို mail queue ထဲကဟာတွေက ကျနော်တို့ဖျက်ပြစ်လိုက်လို့ရတာ သေချာပါပြီ။ အမှန်က မသေချာလည်း ကျနော်ဖျက်ဖို့ပါပဲ။ သူတို့ဟာတွေဆိုလည်း နောက်မှ ပြန်ပို့ပါလို့ ပြောပြီး ဖျက်မှာပါပဲ။
ကဲ ဘယ်လိုဖျက်မလည်း ? Mail ID တွေကလည်းမသိ၊ mailq ကလည်း ကြည့်မရတော့ ဘယ်လောက်ရှိမှန်းလည်းမသိ ၊ queue တစ်ခုလုံး flush ပြစ်လိုက်ရင်လည်း ပေါက်ဆိန်နဲ့ ပေါက်သလိုဖြစ်တော့မယ် ။ Script လေးတစ်ကြောင်း ရေးလိုက်လို့ရရင် ကောင်းမယ် ။ ပထမဆုံး mailq ရဲ့ output ကို ကြည့်ရအောင်။
0BEA87C8029* 111654 Tue Apr310:56:46 marketing@blahblah.com
Database စကားနဲ့ ပြောရင် primary key က ရှေ့ဆုံးကကောင် Mail ID / Queue ID ။ ဒါက Queue ထဲရှိသမျှ mail တိုင်းမှာ unique ဖြစ်တယ်။ SQL မှာ select .. where .. ဆိုပြီး ရေးရသလိုပါပဲ ။ marketing@blahblah.com က mail တွေကိုစစ်ထုတ်ပြီး delete လိုက်ရင် ရမယ်။ Mail ကို Queue ထဲက delete လုပ်တာက postsupre -d ။ ဒါပေမယ့် ID သေချာ ပေးမှဖြစ်မှာ ။ ကဲ ဆက်ရေးကြည့်မယ်။
ခုနက result တွေထဲက marketing@blahblah.com ဆိုတဲ့ address ပါတဲ့ result တွေကိုပဲ ယူမယ် ။
# mailq | grep marketing@blahblah\_.com
ခုနက result မှာ ကျနော်တို့လိုတာ ရှေ့ဆုံးက ID ၊ နောက်က time stamp တွေဘာတွေ မလိုချင်ဘူး filter လုပ်ဖို့လိုပြီ ။
# mailq | grep marketing@blahblah\_.com | cut -d ' ' -f1
အဲမှာလည်း ID မှာ * တွေ ပါတယ်။ Queue ထဲမှာ Active ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြတာပါ။ အဲ asterisk ကိုလည်း ဖျက်မှ ၊ မဟုတ်ရင် postsuper က အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဖူး ။
# mailq | grep marketing@blahblah\_.com | cut -d ' ' -f1 | tr -d '*!'
ဒီလောက်ဆို ကျနော်လိုချင်တဲ့ marketing@blahblah.com ကလာတဲ့ mail တွေရဲ့ ID တစ်လုံးထဲ ရပြီ ။ အဲဒါကို postsuper ကို pass ပေးလိုက်ပြီး ဖျက်လိုက်ရင် ရပါပြီ ။
58964 messages deleted တဲ့ ။ ပလုတ်တုတ် ။ ဒီ mail address ကနေဝင်လာတဲ့ mail ၊ Queue ထဲမှာတင် ခြောက်သောင်းလောက်ရှိတယ်။ အဲကလာတာ မဟုတ်တဲ့ mail ၊ Queue ထဲမှာ နှစ်ထောင်ကျော် ကျန်ပါတယ်။ Spam တွေရှုပ်နေတာနဲ့ deliver မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ mail တွေပေါ့။
အဲနောက်မှာတော့ mail server က ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ marketing@blahblah.com က mail တွေ အဝင်ကတော့ရှိဆဲ။ ဒါပေမဲ့ deliver attempt မလုပ်တော့ပဲ တန်း drop တော့ load သက်သာတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ traffic နဲ့ socket ကတော့ စားဆဲမို့လို့ နောက်တော့ သူတို့ marketing email ကို temporary deactivate လိုက်ပါတယ် ။ အဲတော့မှ Queue ထဲက ကောင်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထွက်တော့တယ်။
တစ်ကြောင်း bash script လေးပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ပြသနာ တော်တော် ပြေလည်သွားတယ် ။ ညနေ ခြောက်နာရီအထိ အားလုံး အဆင်ပြေနေတာနဲ့ စီးတီးဟောကို ထမင်းစားဖို့ သွားလိုက်နိုင်တယ် ။ တော်ပါသေးရဲ့ ။ တော်ကြာ ထွက်ခါနီးမှ ထွက်ခတ်ခတ်ပြီး မိုးချုပ်အောင် နေနေရအုန်းမယ်။
Posted by Divinity at 2:50 AM
Labels: Divinity, Linux, MTA, Postfix, shell
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်။ spam မေးလ်တွေ လွယ်ရမယ်။